अर्थ-वाणिज्य – Page5– Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
३ आश्विन २०७७, शनिबार १२:३१ English
११ महिनामा भित्रियो ७ खर्ब ७४ अर्ब रेमिट्यान्स २ श्रावण २०७७, शुक्रबार ०९:१४
काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा ८५ प्रतिशतसम्म कर छुटको घोषणा १ श्रावण २०७७, बिहीबार ०९:१४
काठमाडौँ, १ साउन । देशकै पहिलो महानगर काठमाडौँ महानगरपालिकाले ८५ प्रतिशतसम्म कर छुट दिने भएको छ । होटेल वा रिसोर्टका नममा दर्ता भई संचालनमा रहेका करदातालाई आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को करमा पुस मसान्तसम्म ८५ प्रतिस्गत कर छुट हुने र माघदेखि असारसम्म ७५ प्रतिशत कर छुट हुने जनाएको छ..
महालेखाले बुझायो वार्षिक प्रतिवेदन, ६ खर्ब खर्चको हिसाब भेटिएन ३१ असार २०७७, बुधबार १९:१४
काठमाडौँ, ३१ असार । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयमा महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले ५७औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गरेका हुन् । प्रतिवेदनअनुसार आव..
अन्तर बैंक एटिएम सेवामा अब शुल्क लाग्न सक्ने ३१ असार २०७७, बुधबार १५:२०
काठमाडौँ, ३१ असार । नयाँ आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सुरु हुने मिति साउन १ देखि विद्युतीय कारोबारमा शुल्क लाग्ने भएको छ । लकडाउनको कारण चैत्रदेखि विद्युतीय कारोबारहरु निशुल्क रहेकोमा अब ति शुल्क लिने वा नलिनेबारे बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैले नै निर्णय गर्न सक्ने छन् । नेपाल बैंकर्स संघ,..
सुनको भाउ इतिहासकै उच्च बिन्दुमा, कति छ बजार मूल्य ? ३१ असार २०७७, बुधबार १२:२६
काठमाडौँ, ३१ असार । नेपाली बजारमा सुनको भाउ इतिहासकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । मंगलबार ९२ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुनको भाउ आज बुधबार तोलामा एकैपटक ६ सय रुपैयाँले बढेर ९२ हजार ८ सय रुपैयाँ पुगेको छ । तेजावी सुन पनि आज तोलामा ६ सय रुपैयाँले नै बढेर प्रतितोला ९२ हजार ३६०..
एफएनसीसीआई निर्वाचनमा चन्द्र ढकाल समूहको उम्मेद्वारी घोषणा ३० असार २०७७, मंगलवार १६:१२
काठमाडौँ, ३० असार । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) निर्वाचनका लागि चन्द्र ढकाल प्यानलको उम्मेदवारी घोषणा भएको छ । ढकाल समुहले औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरेरै उम्मेदवारी घोषणा गरेको हो । ढकाल समुहबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ढकाल, जिल्ला नगर उपाध्यक्षमा गुणनिधि तिवारी,..
घट्यो सुनको भाउ ३० असार २०७७, मंगलवार १३:३५
काठमाडौँ, ३० असार । मंगलबार सुनको भाउ घटेको छ । सोमबार तोलाको ९२ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुन आज तोलामा १ सय रुपैयाँले घटेर आज ९२ हजार २ सय रुपैयाँमा आईपुगेको छ । तेजावी सुन आज तोलामा १०५ रुपैयाँले घटेर तोलाको ९१ हजार ७६० रुपैयाँमा झरेको छ । चाँदीको भाउ भने आज तोलाको..
विद्युत् खेर गएकामा सरकारको ध्यानाकर्षण २९ असार २०७७, सोमबार १९:०३
काठमाडौँ, २९ असार :कोशी करिडोर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा आफूहरुले उत्पादन गरेको विद्युत् खेर गएको भन्दै ऊर्जा उद्यमीले आज सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरुले आज ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र नेपाल विद्युत्..
सुनको भाउ फेरि बढ्यो, कति छ कारोबार मूल्य २९ असार २०७७, सोमबार ११:४३
काठमाडौँ, २९ असार । साताको दोस्रो दिन आज सोमबार सुन चाँदीको भाउ बढेको छ । आइतबार ९२ हजार १ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुनको भाउ आज तोलामा २ सय रुपैयाँले बढेर ९२ हजार ३ सय रुपैयाँ पुगेको छ । तेजावी सुन पनि आज तोलामा २०५ रुपैयाँले बढेर ९१ हजार ८६५ रुपैयाँ कायम भएको छ । चाँदी पनि आज..
एक हजार बढी नयाँ पेट्रोलपम्पको आवेदन रद्द २८ असार २०७७, आईतवार १९:०९
काठमाडौँ, २८ असार:नेपाल आयल निगमले मापदण्डविपरीत आवेदन परेपछि एक हजार बढी नयाँ पेट्रोलपम्प (बिक्रेता)को आवेदन रद्द गरेको छ । नयाँ बिक्रेताका लागि परेका निवेदन एकै स्थान विशेषमा नै एकीकृत हुने गरी आएकाले एक हजार २५ आवेदन रद्द गरिएको निगमले जनाएको छ । जनसङ्ख्या, भूगोल, सवारी..
आयल निगमद्वारा पेट्रोल पम्प खोल्न परेका सबै आवेदन रद्द २८ असार २०७७, आईतवार १६:०६
काठमाडौँ, २८ असार । नेपाल आयल निगमले नयाँ पेट्रोल पम्प खोल्न पाउँ भन्दै परेका सबै आवेदन रद्द गरेको छ । निगमले नयाँ पेट्रोल पम्प संचालनको लागि गत बैशाख र भदौमा आवेदन खुला गर्दा परेका सबै आवेदन रद्द गरेको हो । नयाँ पेट्रोल पम्प संचालन गर्न १ हजार २५ आवेदन परेको थियो । निगम संचालक समितिको..
चितवनको सौराहामा बाढी, होटल र रेष्टुरेन्टहरु डुबानमा २८ असार २०७७, आईतवार १४:०१
चितवन, २८ असार । चितवनको रत्नननगर नगरपालिकास्थित सौराहा क्षेत्रका होटल तथा रेष्टुरेन्टहरु डुबानमा परेका छन् । स्थानीय खगेरी खोलाको बाढी पसेपछि नगरपालिकाको वडा नम्बर ७ र ८ मा रहेका होटल, रेष्टुरेन्टहरु डुबानमा परेका हुन् । नगर प्रमुख नारायण बनका अनुसार खगेरीको बाढीले रत्ननगर..
सुनको भाउ तोलामा १ सयले घट्यो २८ असार २०७७, आईतवार १३:३५
काठमाडौँ, २८ असार । आज आइतबार सुनको भाउ घटेको छ । शुक्रबार तोलाको ९२ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुन आज तोलामा १ सय रुपैयाँले सस्तो हुँदै ९२ हजार १ सय रुपैयाँमा आईपुगेको छ । तेजावी सुन आज तोलामा १ सय रुपैयाँले नै घटेर ९१ हजार ६६० रुपैयाँमा आईपुगेको छ । चाँदी भन आज पनि..
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो २६ असार २०७७, शुक्रबार २०:२१
काठमाडौँ, २६ असार । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । नेपाल आयल निगमले शुक्रबार राती १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर १/१ रुपैयाँले बढाएको हो । यससँगै अब पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय २ रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर..
सुनको भाउ तोलामा २ सयले घट्यो २६ असार २०७७, शुक्रबार १२:३३
काठमाडौँ, २६ असार । शुक्रबार सुनको भाउ घटेको छ । बिहीबार तोलाको ९२ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुनको भाउ तोलामा २ सय रुपैयाँले घटेर आज ९२ हजार २ सय रुपैयाँमा आईपुगेको छ । तेजावी सुन पनि आज तोलामा २०५ रुपैयाँले घटेर ९१ हजार ७६० रुपैयाँ कायम भएको छ । चाँदीको भाउ भने ९ सय ८०..
बूढानीलकण्ठको बजेट रु एक अरब ६८ करोडः डुबान अध्ययन गरिने २५ असार २०७७, बिहीबार २०:०४
बूढानीलकण्ठ, २५ असार :बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ का लागि रु एक अरब ६७ करोड ७८ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । नगरसभाले आव ०७७÷७८ लाई लक्ष्य गरी ८४ महत्वपूर्ण निर्णयसमेत गरेको छ । बजेटमा पूँजीगततर्फको सबैभन्दा ठूलो विकास बजेटका रुपमा कपन ह्याण्डबल चौरको पूर्वाधार..